स्मार्ट सिटीको काम कहाँ पुग्यो ? के भन्छन् शहरी विकास मन्त्री ? - NepalTimes
१७ फागुन, काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडी बढाइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार शहरी विकास मन्त्रालयमा काठमाडौंमा बन्दै गरेका तीन स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साहले काठमाडौंमा बन्ने ४ स्मार्ट सिटीमध्ये ३ वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडी बढेको भन्दै काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीहरुलाई पनि सँगै लान खोजिएको बताएका हुन् ।
काठमाडौं भित्र र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटीलाई समानान्तर ढंगले अगाडी बढाइरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘काठमाडौंमा ४ वटा स्मार्ट सिटी प्रस्तावित गरेका छौँ । जसमा ३ वटा त अगाडी नै बढीसकेको हामि हेरिरहेका छौँ । काठमाडौं बाहिरका पनि स्मार्ट सिटीहरुलाई हामी सँगै लान खोजिरहेका छौँ । काठमाडौं भित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौं बाहिरका स्मार्ट सिटी दुईवटैलाई हामि समानान्तर ढंगले नै अगाडी बढाइरहेका छौँ । भन्नलाई मात्रै स्मार्ट सिटी होइन, देख्नलाई पनि स्मार्ट सिटी । भन्नलाई त हामि सबै चुनावको बेला भन्यौ स्थानिय तहदेखी लिएर सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदैछौ भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय हुनुहुदैन । हेर्ने विषय र व्यवहारतः हामि लागु गर्ने विषय बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा मन्त्रालय अगाडी बढेको छ । बाहिरको पनि दशवटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडी बढाइरहेका छौँ । र काठमाडौंमा व्यहारतः ३ वटा शहरको काम अगाडी बढेको छ ।’
काठमाडौंको भद्रगोल शहरीकरणलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित शहरीकरणको सचेत प्रयासका रुपमा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य गरिदै गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘काठमाडौं नेपालको मुटु हो र यहाँको बसोबास, यहाँको भौतिक पूर्वाधारको स्तरले हाम्रो देशको सम्मान र मानसँग जोडिएको छ । त्यसैले अब हुने नयाँ प्लानिङहरु त्यो उचाइलाई छुन्छ कि छुदैँन, जुन ढंगले विश्वको कम्पिटिशन छ र हाम्रा नेपालीहरु विकसित देशतिर अग्रसर छ । विकसित देशतिर अग्रसर भइरहेको खण्डमा हामि नेपाललाई त्यो उचाइ दिन प्रेरित गरिरहेका छौँ । त्यो लेभलमा उठाउन अहिले अगाडी सारिएको प्रोजेक्ट त्यो उचाइमा छुन्छ कि छुदैन । विश्वको जो प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा हाम्रा सिटीहरुले कुन स्थानमा रहन्छ त हाम्रा सिटीका व्यवस्थापन ? त्यो हाइटबाट सोचिरहेका छौँ । काठमाडौंमा आफ्नै ढंगले शहरीकरण भइरहेको छ । त्यो भद्रगोल शहरीकरणलाई एउटा योजनावद्ध, व्यवस्थित शहरीकरणको सचेत प्रयासका रुपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।’